> Resource > iPad > saar music on iPad ka PC fudayd
Ma suurogalbaa in dari music in iPad aan u hagaagsan Lugood? Haddii aad madaxiinna oo la xoqo oo arrintan ku saabsan, waxaad u timid inaad meel sax ah. Halkan, waxaan jeclaan lahaa inaan ku talinaynaa iPad qalab music kala iibsiga boosaska badan ka, kuwaas oo Wondershare TunesGo . Waxaa si buuxda la jaan qaada Windows Computer. Iyada oo ay caawimaad, waxaad sidoo kale ku dari kartaa music ama playlists ka Lugood ama fayl laga kombiyuutarka. Waxa aad u yaab waa inaysan marnaba ka saaraysaa wax song daray hore markii heeso cusub waxaa lagu daray.
Sida user Mac ah, waxaad isku dayi kartaa Wondershare TunesGo (Mac) . Iyada oo ay caawimo, aad u hagaagsan kartaa music aad Mac in iPad fudayd.
Download iyo rakibi version saxda ah ee qalabka waxaa kombiyuutarka.
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo taageertaa iPad mini, iPad bandhigay isha, iPad Cusub oo dheeraad ah. Hubi info badan oo ku saabsan iPads taageeray .
A tallaabo-tallaabo hage ku saabsan sida loo dhigay music on iPad
In this article, ha i sii qaadin ka version daaqadaha - TunesGo Wondershare sida tusaale. Burcad iPad qalab music kala iibsiga.
Tallaabada 1. Isku aad iPad in kombiyuutarka via cable USB ah
Si aad u billowdo leh, isticmaali cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPad in kombiyuutarka. Your iPad si dhakhso ah loo baari doono ka dib markii uu ku xiran. Markaas, aad iPad ku tusi doonaa ilaa uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. Ku dar music in iPad
In geedka buugga bidix, guji "Media". On line ugu sareeya, guji icon ugu horeysay "Music". Dhammaan heeso aad iPad waxaa lagu soo bandhigaa uu furmo suuqa music ah.
Si aad ku dari music loo doortay in ay aad iPad, waxaad riixi kartaa "Add". In file suuqa kala pop-up browser, falgali in meesha music waxaa loo kaydiyaa. Dooro heeso aad doonayay oo waxaad kor saartaa iPad. Si aad ku dari folder music ah, waxaad riixi kartaa saddexagalka rogay "Add" hoos. In menu jiido-hoos, sidoo kale doorta "Add folder" ama "Add File" in ay ku daraan music.
Haddii aad ku abuuray qaar ka mid ah playlists yaab Lugood ama computer, aad awoodaan in ay sidoo iyagoo aad ku dartid aad iPad. Guji "playlist" geedka buugga bidix. Dhammaan playlists ku muujisan yihiin xaq. Riix saddexagalka "Add" hoos. Markaas, aad u heshid liiska jiido hoos ah.
By gujinaya "Add Playlists ka computer", waxaad ku dari kartaa wax playlists on your computer si iPad. Haddii aad guji "Add Lugood Library", waxaad ka heli suuqa kala pop-up ah. By default, oo dhan playlists ee maktabadda Lugood ayaa la hubinayaa. Si kaliya dari playlists qaar ka mid ah, waa in aad uncheck aad playlists aan la rabin. Markaas, guji "OK".
Fiiro gaar ah: Waqtiga xaadirka ah, version Mac of qalab this ma taageeri gelinaya music on iPad ka Lugood.
Hadda, aad u ogaato sida loo dhigay music on ipad aan Lugood leh this iPad qalab music kala iibsiga. Waa qabow, soo maaha? Download TunesGo oo isku day inaad naftaada.
Sida loo saar Movies on iPad